Muxuu Biden ugu sheegay Erdogan kulankooda Rome?
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Axaddii u sheegay dhiggiisa Turkey Recep Tayyip Erdogan inay tahay inay dalalkooda si wanaagsan u maareeyaan khilaafyadooda.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii Turkey ay ku hanjabtay eryi doonto safiirka Mareykanka, kuna adkeysatay soo iibsashada gantaallada difaaca ee Ruushka.
“Waxaan qorsheyneynaa inaan yeelano wada sheekeysi wanaagsan,” ayuu Biden yiri kahor inta aan labada mas’uul gelin wada-hadallo albaabada ay u xiran yihiin oo qaatay saacado oo ka dhacay magaalada Rome.
Intii uu socday kulanka, ayaa Biden wuxuu xaqiijiyey muhiimadda Turkey ee xulufo ka mid ah NATO iyo iskaashigeeda difaac ee kala dhaxeeya Mareykanka.
Hase yeeshee Biden ayaa Erdogan kusoo qaaday walaaca uu ka qabo heysashada habka difaaca gantaallada Ruushka ee S-400, waxaa sidaas lagu sheegay bayaan kasoo baxay Aqalka Cad.
Turkey ayaa horey looga saaray barnaamijka lagu iibsanayo diyaradaaha dagaalka ee F-35, ayada oo saraakiil difaac lagu soo rogay cunaqabateyn kadib markii ay iibsatay S-400.
Madaxweynaha Turkey ayaa dhowaan sheegay inuu u furan yahay iibsashada hab labaad oo difaaca Ruushka ah, inkasta oo ay jirto muran ka dhashay midkii ay kusoo iibsadeen heshiis ay galeen 2017-kii.
Turkey waxay ku adkeysataa inay haysan karto S-400 ayada oo aan ku dhex darin habka NATO, taasina aysan wax halis ah ku aheyn xulufada NATO.
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska Erdogan ayaa lagu sheegay in in kulanka Biden uu ahaa mid ku dhacay “jawi togan” oo labada hoggaamiye ay ku muujiyeen damacooda ah “inay sii xoojiyaan oo ay horumariyaan xiriirka Turkey iyo Mareykanka ayna isku raaceen aas-aasidda hanaan wadajir ah oo iswaafaqsan.”
War-saxaafadeedka ayaa intaas ku daray inay jirtay sidoo kale “qanacsanaan ku aadan in tallaabooyin isku mid ah loo qaado wax ka qabashada isbeddelka cimilada.”
Aqalka Cad ayaa dhanka kale sheegay in Biden iyo Erdogan ay ka wada-hadlaan hanaanka siyaasadda Syria, kaalmada bani’aadamanimo ee shacabka Afghanistan, doorashooyinka Libya iyo is-mariwaaga diblomaasi ee Bariga Meditareeniyaanka.
Biden ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey xuquuqda aadanaha iyo sarreynta sharciga Turkey, wuxuuna ku baaqay in labada dal ay ka wada-shaqeeyaan inay wax uga qabtaan “khilaafyadooda si wax ku ool ah,” sida uu sheegay Aqalka Cad.